Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Rajadda Uu Ka Qabo Inay U Soo Baxaan Wareega 16-ka Ee Tartanka UCL
Liverpool ayaa haatan waxay qarka u saaran tahay inay gabi ahaanba isaga harto tartanka Champions League, balse, waa hadii aysan isbedal ama soo kabasho sameynin. Reds ayaa ubaahan guul ay ka gaaraan Napoli kulanka ugu dambeeyay ee heerka…
Macalin Jurgen Klopp Oo Si Adag Uga Jawaabay Dhaleecaynta Loo Jeedinayo Kooxdiisa Liverpool
Liverpool ayaa wajaheysa mowjado dhaleecayn ah, taasi oo uga imaaneysa dhinacyo kala duwan, waxaana lagu dhaliilayaan bandhig liita oo ay kooxdu sameyneyso. Kulankii ugu dambeeyay oo ka tirsanaa Champions League waxaa 2-1 uga badisay PSG,…
Klopp Oo Ka Hadlay Xidiga Sanadkaan Ku Guuleysan Kara Bilada Ballon d’or Iyo Laacibka Ugu…
Tababaraha naadiga Liverpool, ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa wuxuu aaminsan yahay in sanadkaan ay ka adag tahay in la xusho xidiga hanan kara abaalmarintaan kuwii hore. Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa loo galbiyay…
Klopp Oo Si Lama Filaan Ah Uga Jawaabay Hadii Uu Jiro Qorshe Uga Degan Joojinta Neymar Jr
PSG iyo Liverpool ayaa gorada is-deri doona kulan ciyaareed ka tirsan heerka Group-yada ee tartanka xiisaha badan ee Champions League, caawa oo Arbaco ah. Kahor kulankaan, macalimiinta kooxaha oo warbaahinta la hadlay waxay kalsooni xoogan…
Klopp Oo Fahfaahiyay Ahmiyada Ay Leedahay In La Ciqaabo Kooxaha Lacagaha Badan Qarash-gareeya
Maamulaha naadiga Liverpool, ninka lagu lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa sheegay inay muhiim tahay in talaabo laga qaado kooxaha ku tunta xeerka asluub wanaaga ee dhaqaalaha. Macalinkaan ayaa sababta ku sheegay inay hoos udhigeyso in…
Klopp Oo Tafaasiil Ka Bixiyey Shir Uu Isugu Yeeratay Ciyaartoydiisa Kadib Guuldaradii UCL
Abdirahman	 Nov 9, 2018
Tababaha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday inuu kulan deg deg ah isugu yeeray ciyaartoydiisa kadib guuldaradii Red Star Belgrade ee Champions League, taasi oo ahayd 2-0. “Kulanka wuxuu ahaa mid guud,” ayuu yiri Klopp markii…
Talaabada Xigta Oo Ay Qaadayaan, Halkii Laga Haystay, Inay Niyad-jabeen Iyo Klopp Oo Furta Tuurtay
Maamulaha naadiga Liverpool, ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa qirtay in ciyaartoydiisa iyo isaga ay ka niyad-jabeen guuldaradii Red Star, oo ahayd 2-0 oo lagu soo dharbaaxay kooxda EPL dheesha. Klopp ciyaarta kadib u waramay…
Klopp Oo Si Layaab Leh Uga Fal-celiyay Guuldaradii Ay Kala Kulmeen Naadiga Yar Ee Red Star Kulankii…
Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay in Liverpool ay ku dhibtooneysay inay hesho "saaxir" madaama labadii gool ee hore oo dhaliyay Milan Pavkov siiyay Red Star Belgrade guulo la yaab leh oo ay ka gaartay Champions League. Guul ay gaari…
Klopp Oo Fahfaahiyay Go’aankii Uu Liiska Ciyaarta Champions League Uga Saarey Xherdan Shaqiri
Liverpool ayaa la balansan dhigeeda Red Star kulan ciyaareed ka tirsan tartanka Champions League, kaasi oo qabsoomaya caawa oo Talaado ah. Xherdan Shaqiri, xidiga garabka uga dheela Reds ayaa seegaya kulankaan xili sababta laysla…
Tababare Klopp Oo Fahfaahiyay Rajada Ay Ka Qabaan Inay Sanadkaan Kasoo Muuqdaan Final UCL
Tababaraha naadiga Liverpool, ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa daboolka ka qaaday rajo balaaran oo uu ka qabo inay kooxdiisa ay kasoo muuqato sanadkaan Final-ka Champions League. Reds ayaa lagu dubtay Final-kii sanad ciyaareedkii…